Isaladi ngesiGreki imikhiqizo yendabuko - ukunambitheka bespoobny!
Kukhona cishe akekho yokudlela noma cafe, imenyu elaliyoba isaladi lingekho utamatisi fresh kanye ukhukhamba ne iminqumo ushizi othambile (ngokuvamile feta), okuyinto iya ngaphansi kwegama "isaladi YesiGreki". Nokho, akubona bonke lokhu isaladi uzoba nelungelo ukubizwa ngokuthi kunjalo, noma uma sikubeka ngokuqondile, ngaphandle amafutha, Riga futhi akukho isaladi feta ka utamatisi kanye ukhukhamba musa Unelungelo ubizwe esiGrekini!
ngokukhuluma ngokungagwegwesi, kwakunokwenzeka ukuba angayi Greece, kodwa futhi kukhona isivakashi amaGreki yobuhlanga edamane ukuhamba yokuvakashela izihlobo zabo e Greece, wawarhola samanje amafutha omnqumo ngesiGreki, ukuthi babe ngake bese uzama lokhu isaladi, okwakubonakala esihlwabusayo ngokungavamile futhi ngabona ukuthi konke esake isingathwe for isaladi Greek - kwakuwuhambo ngokwesivumelwano eyesabekayo.
Ngokuvamile, "isaladi YesiGreki" umqondo njengoba enjalo ingekho, eGrisi, kubizwa "isaladi horyatiki", okusho ukuthi isaladi emzaneni (noma epulazini), futhi ngempela isidlo nsuku zonke kunoma yimuphi umkhaya, nakuba elula, nakuba ochumayo.
Ngakho kanjani ukupheka isaladi YesiGreki?
Lokhu kudinga isaladi ngesiGreki nge fresh utamatisi sesivuthiwe futhi ikhukhamba, anyanisi onsomi, iminqumo black, feta ushizi (a okunosawoti mnene semvu ubisi ushizi, hhayi ushizi, okuyinto okuthengiswa ushizi brine, futhi ayikho enye!) Futhi amafutha omnqumo asezingeni elifanele. Omunye wanezela namanzi red yellow bell pepper. Kuyadingeka ikakhulukazi ukusho ukuthi amafutha omnqumo kudlala indima lapha nje ukugcwalisa, futhi kuyisakhi esisemqoka - kungenjalo kuyoba nanoma yini nje, kodwa akufani horyatiki isaladi. Futhi-ke, izinongo namakhambi - amaGreki uthande isinongo elimnandi futhi ungeze yakhe edumile isaladi oregano (Riga) kanye basil.
Futhi ingabe uyazi ukuthi uyini spice oregano - lokhu sonke ubazi oregano, okuyinto lukhula kahle hhayi kuphela izimo Mediterranean, kodwa futhi zindawo zethu? bafaka kuwo ekuqaleni Juni Ngakho - hhayi kuphela njengoba isitshalo okwelapha kungase kusize, kodwa futhi njengoba i condiment kakhulu, kucebisa iphunga yabo ukunambitheka izitsha eziningi.
Ngakho, zama ukwenza isaladi ngesiGreki, ucabangela konke okungenhla.
Thatha 4 utamatisi ezivuthiwe obomvu, ikhukhamba 2, iminqumo izinto mayelana 12 (esekelwe 3-4 izingcezu ngalinye ekukhonzeni), feta 200 amagremu (owodwa ipuleti obukhulu at 1.5 cm), onsomi isaladi umnsalo (namanje ngokuthi abomvu), amnandi pepper - red yellow kokunye, amafutha omnqumo (uma uthola esiGrekini kunokuba abaseSpain ke zonke langa), oregano nebasili (i ingcosana ophanayo).
Imifino (utamatisi kanye ukhukhamba) uthathe cubes ezinkulu isaladi isiGreki, 1.5 ngamasentimitha, kanye no-anyanisi kanye pepper semicircles (isaladi isitsha noma uthathe esikhulu). Uma umnsalo ziyokuwa munyu kakhulu ke uthele phezu amanzi abilayo ukuthambisa ukunambitheka, kodwa njengoba umthetho, isaladi onion izinhlobo akuzona "okubi", kunalokho elinambitheka sashukela.
Okulandelayo, engeza (seedless ukuthatha) iminqumo lonke. Kodwa uma ukupheka wena, bese sikwazi ukuthatha amathambo ngoba amathambo iminqumo ziwusizo kakhulu, kungenzeka kodwa singalimali ikakhulukazi ukugwinya ambalwa izingcezu - basuke kugaywe kahle esiswini.
Zonke-ke shake, kodwa uma unokuzisola ukuthi ngokunembile awutholi kuphazamise ke ugovuze nje ukunyakaza ezimbili noma ezintathu, futhi phezu imifino ayise lonke ipuleti feta - ushizi okunosawoti mnene ngakho, abahlukaniswe ukuthi phansi zibe yizicucu ngokungenasizathu futhi ixubene nezinye imifino yena njengoba Uma uqala babeka isaladi phezu kwezitsha, futhi ushiye kuze kube yilapho wonke ipuleti ufafaze zonke amakhambi. It uhlala kuphela ukugcwalisa isaladi yethu okumnandi Greek ngamafutha!
AmaGreki ukudla isaladi bazo abadumile nge athosiwe isinkwa esimhlophe, wayicwilisa okuholela ushizi nemifino sauce. Taste emva ulethisi ukumnika kancane, engavamile njengalena!
Kwaba iresiphi for isaladi "abavamile", buyout ebukhoneni imikhiqizo kungenziwa okungenani nsuku zonke, futhi akusho ngizithola. Kodwa etafuleni iholide kungaba kancane enothisa iresiphi bese wenza ngesiGreki isaladi ne-salmon. Ukuze wenze lokhu, ama-salmon anosawoti uthathe yizicucu amancane (uzodinga impela kancane) bese wengeza kuya isaladi - inhlanganisela olukhulu ematfuba kanye impumelelo le isidlo etafuleni iholide surely lekumele azuzwe! Ungakwazi ukuhlobisa nge ulethisi amaqhafuqhafu zidabukile.
Pheka ngenjabulo, ukujabulela ukudla kwakho!
Indlela isaladi nge ngibhema inkukhu imilenze: zokupheka ezintathu ongakhetha kuzo
"Shuba royally" isaladi - etafuleni umhlobiso
Amazwi ahlakaniphile ngothando futhi ukuphila
Iqhaza izilwane nemvelo
Order of St uCatherine Omkhulu: Umlando
HP imishini ehhovisi: laser umbala iphrinta sokuphrinta eliphezulu
Kufika ukuthi mdala ukunikeza mortgage ku indlu? Nokuthathelwa ngabantu abadala
Umuvi zobumba: uhlala kuphi futhi yini ejwayelekile
Amazwibela "The Dawn Lapha Ingabe epholile" Boris Vasilyev
Isisindo ekahle kwabesifazane: etafuleni. ukukhula isilinganiso, isisindo nobudala
Sample teen comedy. Sakaza ka "American Pie"
West Kazakhstan: umlando, abantu, umnotho